Amazon ကအကန့်အသတ်မရှိတိမ်တိုက်သိုလှောင်ခြင်းကို NO ဟုပြောကြားသည် Gadget သတင်း
အမေဇုံက NO ကိုအကန့်အသတ်မရှိ cloud သိုလှောင်မှုသို့ပြောကြားခဲ့သည်
ဟိုဆေး Alfocea | | အမေဇုံ, NOTICIAS
ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးအချိန်မရွေး၊ မည်သည့်စက်ကိရိယာမှမဆိုရရှိနိုင်စေရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများကိုကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပညာရှင်ဆန်ဆန်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသည့်အသုံးပြုသူများပိုမိုများပြားလာသည်။ ။ ယခုမှာဤမိုle်းတိမ်သည်ခုန်။ ခုန်လျက်ပြန့်ပွားလျက်ရှိသည်။ ပံ့ပိုးသူများကရှင်းလင်းစွာစတင်ဖော်ပြနေကြသည် - အကန့်အသတ်မရှိသိမ်းဆည်းခြင်း? အဲဒါဘာမှမရှိဘူး!
နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းလှမ်းလိုက်ခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။ အမေဇုံ, Que စျေးကွက်ကိုချိုးဖျက်ပြီးနောက် ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်ဆယ်ဆပိုမိုစျေးနှုန်းချိုသာသည့်နှုန်းဖြင့်ဘရိတ်နှင့်ကျဆင်းခဲ့သည် သူက
အကန့်အသတ်မရှိ Cloud သိုလှောင်မှု? မဟုတ်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအိပ်မက်၌တည်၏
gရာ အမေဇုံသည်ပမာဏများပြားသောဒေတာအတွက် ဦး ဆောင် cloud သိုလှောင်မှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်လာသည် ဥပမာအားဖြင့်ဥပမာ - Plex ၏ Cloud Library ၀ န်ဆောင်မှုသည်အသုံးပြုသူများကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်စေရန်အကန့်အသတ်မရှိသောသီချင်းများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Cloud တွင်သိုလှောင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သူဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ။ ရိုးရှင်း အကန့်အသတ်မဲ့။ ဈေးပေါသောသိုလှောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းသောရည်မှန်းချက်ကြီးသောအဆိုပြုချက်တစ်ခုစတင်ခြင်းယှဉ်ပြိုင်မှု၏အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှု၏ဆယ်ဘို့တဘို့ဘို့။
သို့သော်ယခုအခါ cloud သိုလှောင်မှုသည်ခုန်။ ခုန်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာနေပြီးအမေဇုံသည်ကဏ္ in ၏အခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကန့်သတ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်းသည်ယခုအချိန်အထိအရေးမကြီးတော့ဟုထင်ရသည်။ ပြီးတော့ဒီသဘောနဲ့ အမေဇုံက Microsoft ၏ခြေရာကိုလိုက်လေသည်။ OneDrive ၀ န်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလမှစပြီးအသုံးပြုသူတစ် ဦး လျှင် 1TB အထိကန့်သတ်ထားပြီးဖြစ်သောà la carte ရွေးချယ်စရာများနီးပါးရှိသည်။
နောက်မှ Amazon ၏ cloud သိုလှောင်မှုကိုကမ်းလှမ်းမှုနှစ်ခုသို့လျှော့ချပေးခဲ့သည်:
$ 100 / တစ်နှစ် 11,99GB ။
တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၆၀ အတွက်တီဘီတစ်မျိုး (ဤသည်မှာအကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်သည်။ )
ထိုမှတဆင့်ဒေါ်လာ ၆၀ / တီဘီနှုန်းဖြင့်နောက်ထပ်တတိယမြောက်တီဘီရောဂါကိုသုံးစွဲနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤအစီအစဉ်အသစ်များထက် ကျော်လွန်၍ တိုးချဲ့ခြင်းကိုမပြုလုပ်လိုပါက၊ သင့်ရဲ့ဖိုင်အားလုံးကို download လုပ်ရန်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ ရှိသည် သူတို့ကိုမဆုံးရှုံးပါစေ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » NOTICIAS » အမေဇုံက NO ကိုအကန့်အသတ်မရှိ cloud သိုလှောင်မှုသို့ပြောကြားခဲ့သည်
ဆူညံသံကိုလျှော့ချရန်နှင့် online tool တစ်ခုဖြင့်ဓာတ်ပုံ၏ resolution ကိုမည်သို့တိုးတက်စေရမည်နည်း
Windows ရှိ application တစ်ခု၏ဖြစ်ရပ်များကိုအလျင်အမြန်နှင့်လွယ်ကူစွာမည်သို့ပိတ်နိုင်သည်